Ihe mgbochi mmiri nwere ike ịbịaru MacBook | Esi m mac
Otu n'ime nchegbu kachasị anyị nwere dị ka ndị nwe MacBook (echere m na laptọọpụ ọ bụla, mana ọkachasị Apple), bụ na anyị nwere mmiri mmiri na anyị. Ọ bụ ezie na laptọọpụ Apple na-echekwa nke ọma n'ime ma na-eguzogide ụfọdụ ọkwa mmiri, anyị enweghị ike ịgha ụgha ma gosi onwe anyị na igwe dị ka nke a. Califlọ ọrụ Californian na-emeziwanye ngwaahịa ya na nke a site na patent a, anyị nwere ike ịmalite nnukwu ọganihu. Anyị nwere ike ịnwe MacBook na a mgbochi mmiri.
1 A mgbochi watering ga-eme ka anyị MacBook ihuenyo mma
2 Isi nsogbu bụ ichebe ozi na-agafe na eriri dị n'etiti ihuenyo na keyboard
A mgbochi watering ga-eme ka anyị MacBook ihuenyo mma
O yighị ka ọ bụ obere ihe iji nweta ihe mgbochi a na-enweghị mmiri. Ugbu a, a na-eji ihe mkpuchi pụrụ iche na-enyere MacBook aka nke na ọ bụrụ na ntakịrị mmiri mmiri awụfu, a naghị ekpughe ime ahụ ma nwee ike idozi ya ngwa ngwa. Agbanyeghị, ruo ugbu a nsogbu nke kachasị gosipụtara n'ụzọ doro anya site na njikọ dị n'etiti ihuenyo na keyboard. Nke ahụ bụ ikwu ebe kọmputa mechiri. Ọ bụ n'ebe dEbee ka ekpughere MacBook dị na ebe nsogbu niile nwere ike isi.
Otú ọ dị, na patenti a, nke Apple webatara na nso nso a "Liquid input akara maka kọmputa ngwaọrụ" na-ekpughe otu Apple nwere ike isi gbochie mmiri na mmiri ndị ọzọ na-emebi MacBook, site na iji ihe hydrophobic na mgbochi iji kwado mgbatị na-ejikọ ihuenyo MacBook na keyboard gị. Site na patent:
A na-ejikwa eriri na-agbanwe ihe na-emetụta ihe na-adọkpụ ihe na-adọkpụ ma jikọta ya na nhicha. Na mgbakwunye na mkpuchi USB n'ime oghere dị n'etiti ụlọ nke ngwaọrụ eletrọnị enwere ike ibugharị. Atụmatụ gụnyere hydrophobic ihe na mkpuchi ma ọ bụ ihe mkpuchi na-eche ihu n'elu ụlọ ngwaọrụ. Ihe mgbochi n’etiti mkpuchi na akpa ngwaọrụ, ọwa ma ọ bụ nkwanye n’elu mkpuchi ihu nke elu okwu ahụ, ọtụtụ mgbanwe dị iche iche nke elu okwu ahụ dị elu, yana mgbanwe nke profaịlụ mkpuchi na-agbanwe agbanwe nke na-achịkwa ma na-egbochi mpaghara nke Ihu kọntaktị n'etiti mkpuchi na okwu ikpe elu.
Isi nsogbu bụ ichebe ozi na-agafe na eriri dị n'etiti ihuenyo na keyboard
MacBooks, dị ka ọtụtụ ngwaọrụ eletrọniki ndị ọzọ otutu akụkụ shei nke ahụ chọrọ mgbaàmà ka e zipụ site n'otu gaa n'ọzọ. Nke ahụ bụ, otu ụzọ ijikọ ihuenyo na keyboard na kọmputa:
Otu ihe ịma aka metụtara ụlọ akụrụngwa eletriki eletriki bụ iji ụzọ mgbaàmà esi n'otu ngalaba ụlọ gaa na ngalaba ọzọ. Devicesfọdụ ngwaọrụ eletrọniki na-aga usoro ntụgharị mgbaama, dị ka eriri na-agbanwe agbanwe yiri eriri. Gburugburu usoro mgbatị ma ọ bụ site na oghere etiti na mgbako mkpọchi mgbatị. Otú ọ dị, a ghaghị ichebe eriri ndị a site na ikpughe na ndị ọrụ yana site na mgbanwe dị ukwuu nke na-akpata site na ịmalite mgbakọ mkpọchi. Usoro mgbatị na mmeghari njikọ nke ihe komputa ndị ọzọ. Dika igwe eletrọniki na-ebuwanye ibu, ohere dị maka mgbakọ mgbakọ, eriri, na eriri dị oke, na-eme ka o sie ike inye ohere na ichebe eriri. Tụkwasị na nke ahụ, ntinye mmiri na irighiri ihe n'ime oghere ndị ahụ siri ike na-eme ka ohere nke ọdịda na ahụmịhe onye ọrụ mebie. Ya mere, Enwere mkpa mgbe niile maka mmelite na eriri na mgbakọ mgbabereta maka ngwaọrụ elektrọnik.
Ikike nchọpụta ahụ kwuru na azịza 'nwere ike ịgụnye a ihe ụfụfụ ma ọ bụ ihe hydrophobic»Ejikọtara ya na eriri na-agbanwe agbanwe nke ejiri zoo ma chebe eriri. Ihe mgbochi ụfụfụ ahụ nwere ike ịkwụsị mmiri na mmiri mmiri ndị ọzọ na mpaghara ahụ. Tụkwasị na nke a, enwere ike ibelata ebe a na-akpọtụrụ ya, yana ịgbanye nfufu na mpaghara ndị edepụtara ma ọ bụ ụzọ nke ụlọ.
Bụ patent anyị amaghi ma ọ ga-emezu. Ọtụtụ n’ime echiche ndị a bụ naanị nke ahụ, ụfọdụ echiche. Naanị oge ga-agwa anyị ma ọ ga-emezu. Nke a ga-abụ otu n’ime ndị ahụ ga-adị mma ka emee.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » MacBook » Mgbochi a na-enweghị mmiri nwere ike ime ya na MacBooks
Kedu ihe na otu esi eji ọnọdụ macOS "rụọ ọrụ na foto na foto"
Kuo dọrọ aka na ntị banyere anya anya kọntaktị na 2030